स्नातक तहकी विद्यार्थी बनिन् कुमारी आमा, छोरी त जन्मीईन् वावु को हो थाह छैन – Gulmiews
स्नातक तहकी विद्यार्थी बनिन् कुमारी आमा, छोरी त जन्मीईन् वावु को हो थाह छैन
२६ मंसिर २०७३, आईतवार १३:३८ गुल्मिन्युज
गुल्मी, मंसिर २६ । आज विहानस्नातक तहकी एक विद्यार्थीले जिल्ला अस्पताल गुल्मीमा छोरी जन्माएकी छिन् । अविवाहित अवस्था मै कुमारी आमा बनेकी उनको वावु को हो भन्ने कुरा उनि वाहेक अरु कसैलाई थाह छैन ।
गुल्मीकै नयाँगाउँ घर बताउने १९ वर्षिया रमिता मल्ल (नाम परिवर्तन) ले स्नातक तह प्रथम वर्षमा अध्यनरत रहेको बताईन् । गुल्मीको पुर्कोटदह घर भएका कार्की थरका युवाले आफुलाई चैत्र महिनामा घर नजिकैको जंगलमा शाररीक सम्वन्ध राखेको उनको भनाई छ ।
कार्की थरका बताईएका ति युवाले नयाँगाउँमा डोजर चालकको काम गर्ने शिलशिलामा उनिसंग लसपस भएको उनले बताईन् । उनले ति युवाको नाम थर र तस्वीर हामीलाई दिए पनि उनी सम्पर्कमा नआए सम्म गोप्य राखिएको छ ।
उनको फेशवुक आईडी सहितको तस्वीर हामीसंग सुरक्षित छ । उनले सदरमुकाम तम्घासमा डेरा सारेको २६ दिन पछि महिला तथा वालवालिका कार्यालयकी कर्मचारी ईन्दिरा थापा पनि सोही घरमै डेरा भएकोले उनलाई अस्पताल पुराउने काम भयो तव मात्र घरबेटीलाई थाह भयो ति युवतीको पेटमा गर्भ रहेछ भन्ने कुरा ।
जिल्ला अस्पताल तम्घासमा ति सुत्केरीको चेहरा गोप्य राखी खिचिएको तस्वीर
आज विहान करिव ५ वजेको समयमा जन्मीएको सन्तान र सुत्केरीको हेरविचार स्याहर सुसारका लागि महिला नेतृ विष्णु कुमारी सापकोटा, निर्मला केसी, निर्मला पोखरेल र महिला तथा वालवालिका कार्यालयकी कर्मचारी ईन्दिरा थापा विहानै देखि अस्पतालमा क्रियाशिल छन् ।
पहिलो भेट ति युवासंग कसरी भयो त ? भन्ने प्रश्नमा सुरुमा फेशवुक, पहिलो भेट जंगलमा गुपचुप भएको उनले बताईन् । दोश्रो पटक उनै कार्की थरका भनिएका युवा संग नयाँगाउँ स्थित घर नजिकैको जंगलमा शारिरिक सम्वन्ध स्थापित भएको र त्यसै दिनको गर्भ रहेको उनको ठहर छ ।
ति युवाले आफ्नो घर पुर्कोटदह बताए पनि आफुले उनि वाहेक अरु केहि नचिनेको उनले बताईन् । ९ महिना सम्म घरका वावु आमालाई समेत थाह नहुने गरी गर्भ लुकाएकी उनले ति युवालाई भदौंमा थाहा दिएको र सोही दिन देखि उक्त ब्याक्ती फोन स्विच अफ गरेर बसे पछि उनि घर न घाट हुनु परेको थियो । किन थाह दिनु भएन त कसैलाई भन्ने प्रश्नमा उनले थाहा दिन मन लागेन भन्ने छोटो जवाफ दिईन् ।
महिला नेतृ विष्णुकुमारी सापकोटाले ति युवतीको पनि ठुलै कम्जोरी भएको बताईन् । चिन्दै नचिनेको मान्छेलाई अस्मीता सुम्पने र नौं-नौ महिना सम्म गुपचुप बस्ने यस्ता प्रवृत्तीले स्यवं उनि एउटी युवतीलाई मात्र नभई आफु अधिकारकर्मीहरुलाई समेत समस्या र चुनौती खडा भएको सापकोटाको प्रतिकृया थियो ।
अचम्मको कुरा कहिले घर कहिले तम्घास र क्याम्पस गर्दा पनि त्यत्रो पेट भएको वारे कसैले वास्ता गरेनन् । यहाँ सम्मकी २६ दिन सम्म डेरामा बसेकी उनलाई घरवेटीले समेत थाह नभएको बताईन् ।
जन्मीएकी सन्तान शकुशल छिन् । केहि वर्ष अघि यसरी नै शिशु जन्मेर न्वारन गर्ने वावु नभए पछि उनै विष्णुकुमारी सापकोटाले न्वारन गरेकी थिईन । अहिले पनि त्यस्तै भयो फेरी यिनको पनि गर्नु हुन्छ कि भन्ने प्रश्नमा सापकोटाले हाँस्दै भनिन् किन नगर्ने पत्तो नलागे ।
युवतीहरु कुमारी आमा बन्दै बच्चा जन्माउँदै गर्ने, महिला नेत्रीहरुले न्वारान गर्दै रहने हो र पुरुषहरु पानी माथीको ओभानो बन्दै जाने प्रवृत्ती कति दिन रहने हो ? प्रश्न गम्भिर छ ।